Hlonipha Igunya Lami | Martech Zone
Hlonipha Igunya Lami
NgoLwesine, Juni 6, 2013 NgoLwesine, Juni 6, 2013 Douglas Karr
Eminyakeni embalwa edlule, ngayeka ukufuna abalandeli nabalandeli. Angiqondile ukuthi ukusho ukuthi bengingafuni ukuqhubeka nokuthola okulandelayo, ngiqonde ukuthi ngayeka ukubuka. Ngiyekile ukulungiswa ngezepolitiki online. Ngayeka ukugwema izingxabano. Ngayeka ukuzibamba lapho nginombono oqinile. Ngaqala ukuthembeka ezinkolelweni zami futhi ngagxila ekunikezeni inani kunethiwekhi yami.
Lokhu akwenzekanga ngezithameli zami zokuxhumana kuphela, kwenzeka nangebhizinisi lami. Abangane, amaklayenti, ophathina… Ngasuka kubantu abaningi. Ngilahlekelwe ubungane, abalandeli abaningi, nabalandeli abaningi - unomphela. Futhi kuyaqhubeka. Ngobunye ubusuku ngatshelwa ukuthi angizange ngibe ngumphakathi ku-Facebook futhi kwakunguye hhayi epholile. Ngazisa lowo muntu ukuthi bangayeka ukungilandela nganoma yisiphi isikhathi.
Iqiniso liwukuthi, angifuni ukwenza njengomuntu engingazami ukukhohlisa abantu ukuthi bangilandele. Futhi angilandeli abanye abantu engibabonayo ngiyanxusa ukulandela kwabo. Bayi-Vanilla… futhi ngithanda iRocky Road.
Abantu badida inhlonipho negunya namandla afanayo napholile. Angifuni ukwenza umzamo wokuba ngifane, ngikwazi ukuba nentshisekelo nokwethembeka. Emsebenzini, angifuni ukuzungezwa ngabantu abathi yebo… Ngiyabahlonipha abantu kakhulu lapho beyeka ukudansa futhi bangitshele ngokungacacisi ukuthi yini okufanele ngiyenze. Uma ufuna ngempela ukuthi ngikusukele ngomnyango, yiba nolaka noma ungathembeki. Awekho amathuba wesibili.
Uma ngicabanga ngabantu engibahloniphayo online, kunokuthile abafana ngakho. Nakhu okumbalwa phezulu kwekhanda lami:
Seth Godin - akukho okuvimba uSeth ekuvezeni umbono wakhe. Ngimbonile ebhekana nomlandeli okhuluphele ngokweqile kanye futhi wavele wadweba umugqa esihlabathini futhi akazange avume ukuthi udluliswe.
Guy Kawasaki - cishe eminyakeni eyi-6 eyedlule, ngenza ukuphawula okuhle kwezimbongolo ngeqembu likaGuy labantu elimthungatha. Wadubula ngokushesha futhi wakwenza kwacaca ukuthi ngubani owayesemuva kwekhibhodi.
Gary Vaynerchuk - okusobala, okungaxoliswanga nasebusweni bakho - UGary uhlale etshela izethameli zakhe ukuthi yini okudingeka ziyizwe.
Jason Falls - Akukho ukumisa uJason. Isikhathi.
UNichole Kelly - lo wesifazane iziqongo… ezisobala, ezihlekisayo njengesihogo, futhi - futhi - akazigodli.
UChris Abraham - Nginesiqiniseko sokuthi mina noChris sinokuphendula okufanayo noma nini lapho sibona okuthunyelwe kwezepolitiki okubhalwe omunye. Akalokothi ahlehle futhi uqotho futhi unothando.
Angiqiniseki ukuthi kukhona yini omunye walaba bantu onjengami (ngiyazi ngokweqiniso abanye babo bayayidelela ipolitiki yami). Kepha akunandaba ngoba mina hlonipha igunya labo. Ngiyazi ukuthi lapho ngidinga impendulo eqotho, laba ngabambalwa babantu abangasoze babhema intuthu. Ngeke banciphise amagama… bazokusho.
Eminyakeni embalwa edlule, ngifunde ukuthi ikhasimende elijabulayo akusho hlala njalo. Ikhasimende elithola imiphumela emihle, noma kunjalo, lihlala linamathela. Umsebenzi wami akukhona ukuba umngane weklayenti, ukwenza umsebenzi wami. Lokho kwesinye isikhathi kudinga ukuthi ngibanikeze imali lapho kwenziwa izinqumo ezimbi. Ukunikezwa ukukhetha kokufuna ngenhlonipho nokuqinisekisa imiphumela NOMA ukulimala kwebhizinisi leklayenti lami futhi kubasize - ngizohlala ngibanikeza izindaba ezimbi.
Kungilimazile ezinkundleni zokuxhumana? Kuya ngokuthi usho ukuthini ukulimala. Uma isilinganiso sakho sempumelelo singama-fan wabalandeli nabalandeli - yebo yebo. Angilinganisi impumelelo ngale ndlela, noma kunjalo. Ngikulinganisa ngenani lezinkampani esizisizile, inani lezincomo esizithola ngomlomo, inani labantu abasukumayo ukungibonga ngemuva kwenkulumo, inani lamakhadi okubonga alenga odongeni lwethu work (sinawo wonke umuntu!) kanye nenombolo yabantu abaye banamathela kimi eminyakeni edlule.
Inhlonipho negunya akudingi ukuvumelana noma ikhono elifana nelakho. Nginamakhasimende amahle, abasebenzi abakhulu, abafundi abakhulu, nabangane abaningi, abalandeli nabalandeli engibadingayo impilo yami yonke.
Thembeka kuzithameli zakho. Leyo ukuphela kwendlela yokwenza iqiniso kuwe.
I-PS: Uma uzibuza ukuthi ngubani engingamhloniphi ku-inthanethi… uhlu lude impela. Njengamanje, phezulu kohlu lwami yi- Matt Cutts. Akuyona eyomuntu siqu ... Angikwazi ukumela izimpendulo zakhe ezilungile ngokwezepolitiki, ezilinganiswe ngokucophelela, nezincwadi ezibhaliwe zemibuzo ejwayelekile. Ngibuze uMatt imibuzo eminingana ekhomba eminyakeni edlule kepha, ngokusobala, amaphuzu ami eKlout awaphakeme ngokwanele ukuthi angaze aphendule. Ngihlala ngimbona exoxa nobani. Mhlawumbe yinto engiyishilo… angazi futhi anginandaba.
Ngeza kulolu hlu noma ngubani oqhubeka nokuzithwebula izithombe ukuze abelane ngazo usuku lonke noma akhulume ngaye kumuntu wesithathu. Uma babelana ngesilinganiso sabo, ngifuna ukubagwaza emphinjeni. Vele usho.
Tags: chris abrahamgary vaynerchukGuy KawasakiuJason uyawakelly kellyuthanda uNkulunkulu
Ungakhulisa Kanjani Ukuzibandakanya Kwezithameli futhi Uthole Impendulo
Ukuhlolwa kokusebenziseka kwe-Crowdsourced kusuka ku-UserverTesting.com
Jun 7, 2013 ku-1: 42 PM
Kufanele ngisho ukuthi okuthunyelwe kwakho kungikhuthazile - okungenani ngokwanele ukuthola impendulo. Ngokuqinisekile - yiqiniso kuwe. Ukuphela kwendlela yokuwuthokozela ngempela umsebenzi wakho. Into eyodwa nje eyangixaka nokho futhi yayiseduze ekugcineni. Awubathandi abantu ababelana ngamakhwothi abo. Ukufuna ukwazi. Ngivame ukuvuka ngezikhathi zokuqala ngicabanga ngokujulile noma okubili, okunye okungishukumisayo ngempela. Manje sengiyazi ukuthi abanye bangashukunyiswa kangako, kepha ngincamela ukuzwa okusezinhliziyweni zabo, kunokufunda izinto eziphinde zavuselelwa kwabanye (imvamisa ezivela kulabo ababizwa njengosaziwayo). Imicabango yami nje.
Jun 7, 2013 ku-2: 46 PM
Sawubona @ impumelelo: disqus. Angiphikisani nokuthi abantu babe 'nezingcaphuno' ezinhle… kulapho nje bethumela khona lesisho, ngezingcaphuno, negama labo kuso ukuze abanye babelane ngaso. Kubukeka sengathi kuyinhlekisa - umbono wami nje. Ungangicaphuna kulokho 😉
Jun 8, 2013 ku-4: 47 PM
“Angifuni ukwenza imizamo yokuba ngikwazi ukufana, ngifuna ukuba nothando nokuthembeka. ”
Ngiyakuthanda lokhu, nami futhi. Ngilokhu ngifunda izindatshana eziphakamisa ikhwalithi yezithameli ngobuningi. Kubukeka sengathi abantu abaningi abaphumelelayo bathola ukuthi kunabantu babo futhi unamathele kubo esikhundleni sokuzama ukujabulisa wonke umuntu. Okuthunyelwe okuhle.